मङ्गलबार, जुन 5, 2012 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
अमेरिकी मार्केटिंग संघ (AMA) एक ब्रान्ड परिभाषित गर्दछaनाम, अवधि, डिजाइन, प्रतीक, वा कुनै अन्य सुविधाहरू जसले एक विक्रेताको राम्रो वा सेवा अन्य विक्रेताहरूको भन्दा भिन्नको रूपमा पहिचान गर्दछ।.
कुनै पनि सरल प्रश्नहरू भेट्टाउन गाह्रो छ: तपाईं को हुनुहुन्छ? किन तपाइँको कम्पनी अवस्थित छ? के तपाईंलाई प्रतिस्पर्धा भन्दा फरक बनाउँछ? र अझै, ती केहि कठिन प्रश्नहरू हुन् जुन व्यवसायले जवाफ दिन सक्दछ। राम्रो कारणका लागि पनि। तिनीहरू ब्यापारको मुटुमा हड्ताल गर्दछन्, यसको मुख्य मूल्यहरू र मूल उद्देश्य। र एक प्रतिस्पर्धी बजार मा यसको धेरै अस्तित्व।
मा मान्छे Godfrey एक ब्रान्ड के हो भन्नेमा यो शान्त भिडियो इन्फोग्राफिक सँगै राख्नुहोस्
तपाईं यहाँ पूर्ण ब्रान्डि PDF PDF को एक प्रतिलिपि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
टैग: ब्रान्डब्रान्ड परिभाषितब्रान्ड परिभाषाGodfreyभिडियो इन्फोग्राफिकएक ब्रान्ड के हो
साइट माइग्रेसन आत्महत्याबाट कसरी बच्न सकिन्छ